Lacag aruurinta | Mysite 1
"Wax weyn waxaa lagu sameeyey by taxane ah oo wax yar isu keenay." ~ Vincent Van Gogh
Aldo, waxaan lacag aruurinaa si aan u hubinno IN DHAMMAAN ardayda in la siiyo fursado ballaaran oo waxbarasho oo khibradeed leh.
Waad taageeri kartaa Aldo Leopold Community School & ALAPTO markaad wax ka iibsaneyso Amazon? Waa bilaash oo fudud in la dejiyo!
WisCon (oo loo gartay Shirweynaha Xigmadda) waa lacag aruurinta Aqoonta-a-Thon halkaasoo ardaydu lacag ku uruurin doonaan iyagoo wax ka baranaya oo ka jawaabaya heerka 50 fasal ee aqoonta guud ee ku habboon ka dibna ka qaybqaata mashruuc kooxeed oo ka shaqeeya xallinta dhibaatada adduunka.
Lacagta la uruuriyay waxaa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo khibradaha barashada, safarada gaagaaban, farshaxan yaqaanayaasha degenaanshaha, baska, iyo waxyaabo kaloo badan.
Ardaydu waxay baran doonaan su'aalaha oo ay ballanqaadyo qaadanayaan laga bilaabo hada illaa badhtamaha Febraayo xafladduna waxay dhici doontaa Febraayo 27 iyo 28.
Kheyraadka loogu talagalay waalidiinta
Mashruuca Solar Array
Bishii Nofeembar 2019, Aldo (Ned Dorff) wuxuu ka aqbalay deeq laga helay Deeqda Cagaaran ee Cellcom si aan u bilowno dhaqaajinta aan ku nadiifinayno tamarta qoraxda. Hadafkayagu waa inaan helno qorraxda ugu horreysa ee qorraxda oo ay xiraan Maalinta Earth 2020. Waxaan u baahan nahay caawimaadda bulshada si aan halkaa u helno!
Iskuulka Aldo Leopold Community School wuxuu hadda aruurinayaa lacag uu ku caawiyo kharashaadka mashruucan.
ALAPTO waxay u isticmaashaa lacag aruurinta sidii fursado ay kula wadaagi karaan ganacsatada maxalliga ah iyo ilaha bulshada si ay gacan uga geystaan ​​kor u qaadida lacagta safarada iskuulka, baska, dadka ku hadla martida, iyo kharashaadka kale ee waxbarasho ee kala duwan.
Fiiri e-maylkaaga, nagala soco warbaahinta bulshada, oo si joogto ah u hubi jadwalka munaasabadda si aad ula socoto waxa ka socda bulshada dugsiga.